musha OCEANIA FOOTBALL STORI Aaron Mooy Vechidiki Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeMiddle Genius iyo inozivikanwa zvikuru nezita reNickname; "Smooth Head". Our Aaron Mooy Childhood Story pamwe ne Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda zvisingazivikanwi zvishoma nezvake pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvehutungamiri hwake hwepamusoro-soro asi vashomanana vanofunga nezveAaron Mooy's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Aaron Mooy Vechidiki Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Aaron Frank Mooy akaberekwa musi we 15th munaSeptember muSydney, Australia. Paakaberekwa, akatumidzwa Aroni Kuhlman uye kwete Aaron Mooy. Amai vake veDutch vakashandura zita rake apo akaparadzaniswa nababa vake apo Mooy muduku akanga achiri muduku. Muzvokwadi, Mooy akaona baba vake kamwe chete - uye zvishoma pfupi paaiva muduku.
Mucheche ane nyanya, ane bvudzi akachena akada mubhokisi uye vabereki vake vakasimudzira icho chido. Kare kumashure, akanga akapindwa muropa nekuona Australian football football (Premier League) paTV uye achitsamwa pamusoro payo. Mooy aigona kuenda kumisika ndokuwana jeri reManchester United Premier League. David Beckham akanga achida, nguva ipi neipi paaiva paTV Aaron aifanira kutarisa. Mushure mekunge aona Beckham, iye achaita zvaanoita akasununguka-pamba uye achizvifungidzira kuti akanga ari iye.
Sezvo Bhola rakazova chikamu chikuru chehupenyu hwake hwehuduku, Aaron haagoni kurega kufunga nezvekuve mutambo. Akabatana neThe New South Wales Institute of Sport (NSWIS), iri paSydney Olympic Park kuti atange huduku hwake.
Mooy akatevera nzira yakatsikwa nevatambi vemahombekombe uye akaisa hupenyu hwake achiri muduku kuti aite zvaaifunga. Akabva kuAustralia pazera remakore 15 nemasikati akavhara uye chido chinopisa sezvinoratidzwa pasi apa.
Akatanga basa rake muEurope semudzidzi wechidiki kuBolton Wanderers mushure mokunge aonekwa naChris Sulley. Aaron Mooy akaramba kushandiswa kwebvumirano kubva kuBolton munaJuly 2010 mukutsvaga rimwe dhora rekutanga. Akazobatana Scottish Premier League kirabhu St Mirren musi wa 23 October 2010. Zvinotyisa, Mooy akazotengesa England kuScotland asati adzokera kumba ku2012 kuti abatane neWest Sydney Wanderers muA-League.
Muna 2016, akadzoserwa kuEngland kunotamba kuManchester City. Ikoko, akapfuurira kubva pachikwereti kuti aende kusingaperi muHuddersfield Town. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Aaron Mooy Vechidiki Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Aaron Mooy akawana rudo rwehupenyu hwake, Nicola mu2011 munguva yake pamwe neboka reScotish St Mirren FC Aaron naNicola yakakura pamwe chete rudo uye kubatana. Vanoona ukama hwavo sehupenyu husingaperi.
Kufanana nemubereki mutsva, hupenyu hwaAaron Mooy hwakashanduka apo mwana wake wokutanga akaberekwa. Nyeredzi yeAustralia yakanga ine zvikonzero zvakawanda kupfuura dzakawanda panguva dzekufungisisa zvakadzama. Tinokuudzai kuti sei ...
Mumashoko ake... "Zvino zvandakave nemwana (Skylar) Ndinonzwisisa kuti ndinoda mwana wangu zvakadini. Izvo zvisiri izvo. Kuti iye asadaro vanoda kundiona, sababa vangu. Zvechokwadi, ini handinzwisisi. Ndiri kufara iye zvino. Zvakapfuura, handidi kufunga nezvazvo zvakare. Ndaimbogara ndichifunga nezvebhola uye kana ndaiva nemutambo wakaipa ndaifunga nezvayo kwemazuva. Iye zvino ndine mwana wangu uye zvinotora pfungwa dzangu pazviri, '' Aaron Mooy akati.
Vaya vekare veWest Sydney Wanderers neMelbourne City nyeredzi vakatanga kusangana naNikola mu2011 uye vakafara kuti vakasungira ruzivo. "Pakupedzisira mudzimai wangu! Zuva rinoshamisa sei, " iye akanyora pa Instagram.
Aaron Mooy Vechidiki Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Pasinei nemhuri yake yakaoma, Mooy akakurira mumhuri ine rudo, uye amai vake vane ushingi vanopa musana pamwe chete nababa vanochengeta, Alan Todd uyo Aaron anoda zvikuru. Baba vababa vaAroni vakazvarwa muGermany. Rimwe zuva pane imwe nguva, Aroni akasarudza kusangana nababa vake chaivo paaida kuti asayine pamutsara wekare kuti ave nechiDutch passport.
Sezvakaitwa naAroni; "Ndakasangana naye kamwechete kuti ndimuise kuti asayine mafomu eforchi yangu yeDutch, ndiyo ndiyo nguva bedzi," Mooy akati ...."Kwakanga ichangobva kuenda kuEngland, saka ndaive 14. Yakanga iri pfupi. "
Paakasangana naHama wake: Rimwe zuva paaiva mune imwe nzvimbo yekutengesa nevamwe veWestern Sydney Wanderers vakomana uye mwana uyu akauya kwaari ndokuti, 'Hi ini ndiri Kuhlman, tine baba vakafanana uye amai vangu vane mifananidzo yako secheche'. Aaron Mooy akati ..."Ndakashamisika, ndakarasikirwa nemashoko, ndisinganyatsogoni. Ndaiziva kuti aizova nevana asi ndakanga ndisingazivi kuti vangani kana makore. Handifungi kuti ndichatombotaura naye. Kunyange semwana ini ndakanga ndisingadi kumuziva, ndaigara ndakanyadziswa, yakange yakareba kwenguva refu kunze kwekuti ave nekutaurirana. Kutaura zvazviri, zvandinotanga kuyeuka zviri kutamba bhora reCarlingford Redbacks nemudzimai wangu wedangwe semudzidzisi. ''
Aaron Mooy Vechidiki Nhau Plus Untold Biography Facts -Tattoo Facts
Aaron Mooy ane chirevo chinotevera kumunhu hwake.
Aaron Mooy's Strengths: Iye akavimbika (ukama nebasa-akachenjera), kuongorora, unyoro, kushanda zvakaoma chaizvo.
Unoshayiwa hwaAaron Mooy: Anonetseka zvikuru uye anogona kushanda zuva rese asina kutamba.
Zvinodaro Aaron Mooy: Kuveura vhudzi rake, mhuka, zvokudya zvine utano, mabhuku, chimiro uye utsanana
Zvinorehwa naAroni Mooy: Kunyengera, kukumbira rubatsiro, kutora nzvimbo yepamusoro.
Mukupfupisa, Aroni ndiye mumwe munhu aizoramba achiterera kune zviduku zvishoma uye pfungwa yake yakadzika yevanhu inoita kuti akangwarire muupenyu hwekuita.
Mooy anobva kuDutch heritage, uye kuruboshwe rwake rworuboshwe, ane mazwi "Leven, Lachen, Liefde" tattooed, iyo inoshandurirwa "Rarama, Rudo, Ruka". Amai vake, Sam, vane mazwi akafanana pamusoro wake.
Aaron Mooy Vechidiki Nhau Plus Untold Biography Facts -Akaenda kuchikoro chesekondari chakafanana naHarry Kewell
Westfield Sports High, inozivikanwawo se Fairfield Football Factory, ine mukurumbira wekugadzira nyanzvi dzemitambo dzine mitambo muAustralia. Kewell akanga apedza chikoro chesekondari uye ndizvo zvaive zvakaita Mooy.
Aaron Mooy Vechidiki Nhau Plus Untold Biography Facts -Rwiyo Rwokuremekedza
Mooy's head smooth is a topic of Huddersfield Town chants. Akaimba kuimba yaBoney M's 1978 hit Iyo inoenda seyi .."Hooray! Hooray! NdiHoli-Holiday! ", rwiyo rwunoenda, "Aaron Mooy, Aaron Mooy. Aroni, Aroni Mooy. Haana bvudzi, asi hatina hanya. Aroni, Aroni Mooy.
Aaron Mooy Vechidiki Nhau Plus Untold Biography Facts -Hakaisa Huddersfield Town kuguta reEPL kwekutanga kokutanga kubva ku1972
Huddersfield Town vakanga vasina kutarisirwa kuti vawane kukurudzira kune Premier League iyi mwaka, asi naMooy achiita zvemashiripiti mukati maro, kirabhu yakadzokera kune hurukuro huru kwekutanga munguva yemakore 45. Vari munzira, Mooy akawana zvinangwa zvina, kusanganisira chikonzero chakakosha pakunamata Mukumutambo wekupedzisira wemwaka we 2016-17.
CHOKWADI KUTI: Tinovonga nekuverenga Aron Mooy Childhood Indaba pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.
Brighton uye Hove Albion Nhoroondo yeBhora Diary